အင်တူလက်မျှ နဂိုပကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ ဟူးရားဗေဒင် (၁)
# (၁)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများ »
# အင်တူလက်မျှ နဂိုပPublished February 11, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged ingaweikza, Myanmar Astrology, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, အင်တူလက်မျှ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	5 comments on “# အင်တူလက်မျှ နဂိုပ”	laylaykyi on August 19, 2010 at 12:48 pm said:
I want toamunber
Su Thet Paing on December 26, 2012 at 2:09 pm said:
ကိုယ်တိုင်လည်း လွယ်ကူစွာတွက်ကြည့်လုိ့ရအောင်အခုလိုလေးတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
TNA on April 25, 2013 at 8:41 am said:
If I am in Singapore, What time should I take? Singapore time or Myanmar time? Thank you for this simple and powerful way.
Dr.Tin Bo Bo on April 25, 2013 at 8:51 am said:
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေရင် မြန်မာစံတော်ချိန်ယူ ၊ စင်္ကာပူမှာ နေရင် စင်္ကာပူ စံတော်ချိန်ယူ။ အမေရိကန်မှာနေရင် အမေရိကန် စံတော်ချိန်ယူ။
TNA on April 27, 2013 at 4:33 pm said:
Ok , got it , Thanksalot.